Nhau - Yedu hombe 30000+ maikorosikopu odha kuBangladesh mu2019
Mu2018, mutengi wedu muBangladesh akatiudza kuti vaizoenda kuhurumende thenda, kwemazana anopfuura mazana matatu emamikorosikopu, nemagwaro epamutemo. Iyo nyoro yakanangana nekupa microscope yevadzidzi kuzvikoro zvinopfuura 10000+ munyika yeBangladesh, inogonesa vadzidzi vepuraimari & yepakati chikoro kuti vatange yavo yesainzi chidzidzo nesimba rakasimba.
Mushure mekutaurirana pamusoro pegore rimwe, mu2019-03 takawana nhau dzakanaka pakupedzisira - takahwina iyo thenda ye20000 pcs A11.1506-A1 uye 10000 pcs A11.1522-D! Opto-Edu inofanirwa kuendesa zvinhu zvese mukati memwedzi mitanhatu, kubhadharwa kwakazara ne100% LC, huwandu hwese pamusoro pe19.5 Miriyoni US Madhora. Iyi ndiyo KUKURA kwakanyanya munhoroondo yaOpto-Edu, pamwe hombe kurongeka muChina microscope musika wekutengesa zvakare!
Mushure mekunge LC yagashira nekusimbisa, fekitori yaOpto-Edu inotanga kugadzirwa ipapo ipapo. Iwo odhiyo yakakamurwa kuita matanhatu kutumira, imwe neimwe iine 3000 kusvika 6000 mayuniti, inoda 3-10x 20 'FCL. Mutengi akaronga yavo yekuongorora kambani kune fekitori kutarisa zvese zvinhu zvisati zvaendeswa, izvo vanhu vaOpto-Edu vanogara ipapo kuti vateedzere kugadzirwa uye kuongorora zvakare.
Muna 2019-09, Opto-Edu akabudirira kutumira zvinhu zvekupedzisira zvematch, uye akatumira zvinyorwa zvese zvinodiwa neLC kuvhura bhangi munguva. Isu takagamuchira mubhadharo wakazara weodha gare gare muna 2019-10, uye yekupedzisira mhando mushumo kubva kumutengi, akataura kuti ese maOpto-Edu maikorosikopu akaendeswa kuzvikoro kwese muBangladesh, mhando yakapasa bvunzo. Opto-Edu ichapa 3 Makore mhando garandi yemakorosikopu aya, kuvimbisa mutengi & mushandisi wekupedzisira kushandisa edu maikorosikopu pasina kunetseka.
Ndinovimba, Opto-Edu achave nemukana wakawanda wekuhwina akawanda mathenda mumusika weBangladesh mune ramangwana!